Friday, 16 April, 2021 | २०७८ बैशाख ३ गते , शुक्रवार
नासाका वैज्ञानिक मंगल ग्रहको थप अध्ययन गर्दै
२०७७ फाल्गुन १२ गते , बुधवार प्रकाशित
मंगलग्रहमा मानिसहरुको सफताको शिलसिला जस्तो किसिमले अगाडि बढिरहेको छ त्यो निकै उत्साहपद र सुखद रहेको छ ।पछिल्लो अमेरिकी अन्तरीक्ष एजेन्सी नासाको रोभरले गएको शुक्रबार अर्थात फागुन ८ गतेका दिन मंगल ग्रहको सतहमा सुरक्षित अवतरण गरेर पृथ्वी अनमोल भिडियो पठाउन शुरु गरिदियो । रोभरद्वारा बनाइएको उच्च गुणस्तरको भिडियोबाट केही तस्वीरहरू निकालियो । जसमा मंगल ग्रहको सतह देखिएको छ । वैज्ञानिकहरुले त्यो सतहको अध्ययन शुरु गरिसकेका छन् ।
यस अध्ययनमा खाशगरी के जान्न कोशिश गरिने छ भने के मंगल ग्रहमा कुनै बेला जीवन थियो । यो अध्ययन वास्तवमा चाखलाग्दो मात्रै छैन, मानिसका लागि उपयोगी पनि छ । यो मंगल ग्रहलाई सही किसिमले जानिसके पछि नै अगाडिका अरु ग्रहहरुको खोज अनसुन्धानमा पनि अझ तीब्रता आउने आशा गर्न सकिन्छ । यो नासाको पछिल्लो ताजा अयिानको आरम्भ गएको बर्ष ज’लाई ३० देखि भएको थियो । अमेरिकाको फ्लोरिडा स्थ केप केनावेरल अन्तरीक्ष केन्द्रबाट मंगल ग्रहको यात्रा शुरु गर्दै त्यो यानले ४७.२ करोड किलोमिटरको दरी पार गरेको थियो । त्यस यानको रोभर मंगल ग्रहको सतहमा सही किसिमले उत्रिनु निश्चय नै एउटा निकै ठूलो बैज्ञानिक सफलता मानिएको छ । हुन पनि यो मंगलमा पठाइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रोभर हो र यसको प्राबिधिक क्षमता, दक्षता र कुशलता पनि निकै राम्रो मानिएको छ ।
यो अमेरिकी अन्तरीक्ष एजेन्सीको नबौं मंगल ग्रह अभियान हो । अहिले यसको आरम्भिक सफलताबाट बैज्ञानिकहरु निकै नै उत्साहित भइरहेका छन् । नासाको यो सफलतामा एक भारतीय मूलकी अमेरिकी बैज्ञानिक स्वती मोहनले कमान सम्हालेको छ । यस अन्तरीक्ष अभियान अन्तरगत मंगल ग्रहबाट सानो चट्टान या माटो पृथ्वीमा ल्याउने कोशिश गरिने छ । यदि यो अभियान सफल भयो भने त्यो एउटा गौरब र उत्साहको बिषय हुने नै छ । अनि थप अन्तरीक्ष खोज अनुसन्धाका लागि पनि थप ऊर्जा र बल प्राप्त हुने छ ।
अहिलेसम्म बैज्ञानिकहरुले मानेका छन् कि यदि त्यो ग्रहमा कुनै बेला जीवन थियो भने पनि त्यो तीनदेखि चार अर्ब बर्ष पहिलो थियो र शायद त्यो बेला यो लाल ग्रहमा पानी धेरै नै थियो । मंगलको सतह र माटोको अध्ययनले यथार्थ रहस्यको उद्घाटन हुने नै छ । हुन पनि यो अभियान अमेरिकी बैज्ञानकिहरुको बर्षौंदेखिको मेहनतको प्रतिफल हो ।
यो मंगल ग्रहमा पुग्ने धरतीमा मानिसहरुको एउटा चीर प्रतिक्षित सपना हो । त्यहाँ पुगेर त्यसलाई जान्ने बुझ्ने सम्वन्धमा अहिलेसम्म ६० वटा अभियानहरु चलेका या चलिरहेका छन् । यसमा अमेरिकाका अतिरिक्त चीन, रुस यूरोपेली संघ, भारत, बेलायत, जापान संयुक्त अरब इमिरेट्स आदि देशहरु सामेल र प्रयासरत रहेका छन् ।
निश्चय नै मंगलको परिक्रमा गर्ने गरेका यानहरुको तुलनामा यो मंगलमा उत्रिएको रोभरबाट मानिसहरुलाई निकै निकै बढी अपेक्षा हुने नै भयो । मंगल ग्रहको खोज अन’सन्धाले मानिसहरुका लागि उपयोगी कुरा के निस्केला अहिले त्यो एउटा कौतूहलपूर्ण जिज्ञाषा र प्रतिक्षाको बिषय नै छ ।
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nepalpatranews34/public_html/files/single-content.php on line 86
एम.सी.सी. संझाैतालाई संसदमा प्रवेश नगराउन २३ दलको चेतावनी !
यो नयाँ बर्षले........
नायब सुब्बाहरू नै सिंहदरबारमा प्रदशर्नमा निस्के : प्रहरीले लियाे नियन्त्रणमा
काेराेना भारतबाट प्रबेश गर्नेमा धेरै देखियाे